भारतको मनसुन वर्षाले सम्पूर्ण देशलाई ढाक्यो World’s biggest water lily species discovered सिड्नीको बाढीले सडकलाई नदीमा परिणत At least five killed in Italian Marmolada glacier collapse
आईत, पौष २२, २०७५
बागमती नदी सरसफाई अभियानल २८८ औँ हप्तामा आईपुग्दा देशैभर नदी नाला, टोल सरसफाईको लहर चलेको छ । विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरुको सक्रिय सहभागितासगैँ अभियानमा महत्व दर्शाएको छ । सरसफाईका काम भए, ठोस फोहरमा कमी पनि आएको छ । नदीमा मिसिएका तरल फोहर व्यवस्थापन र लुकिछिपी फोहर फ्याक्ने काम बन्द भएका छैनन् । ईको समाचारको टोलीले नदी सरसफाईमा सक्रिय सहभागिता जनाउदै आउनुभएका अभियन्ता रुद्र पौडेलसगँ नदी सरसफाईका लहर, प्रभाव, परिवर्तन र आगामी बाटो कसरी तय हुन्छ भन्ने विषयमा सोधेका थियौँ । हामी उहासगँ गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गर्दैछौ ।
नदी सरसफाईका अभियान चलिरहेको अवस्थामा हनुमन्ते खोलापनि शुरु गर्नुभयो । यो रहर कि लहर, कहिले सम्म चल्छ ?
धन्यवाद प्रश्नका लागि । मेरो विचारमा प्रत्येक नागरिक आफु र आफ्नाका लागि बाचेकै हुन्छ । तर सामान्य रुपमा सोच्ने हो भनेपनि पृथ्वीमा सामाजिक प्राणी भएर जन्मेपछि क्षमता अनुसारको सामाजिक कर्तव्य पनि हुन्छ । म समाजप्रतिको दायित्वबोध भएर यहाँ आएको छु । अब नदी सरसफाई अभियान बागमतीमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले पनि लहरका रुपमा चलेको छन् जुन अत्यन्त सकारात्मक हुन् । यस अभियानका केहि पात्र वा संस्था रहरका रुपमापनि आउनुभयो होला तर काम र प्रचार जे जे गरेपनि अभियान त चलेकै छ । हामीले शुरु गरेको अभियान नदी पूर्ण रुपमा सफा नभएसम्म चलिरहेन्छ ।
यी नदीहरु कहिले सम्म सफा भईसक्ला भन्ने प्रश्न गरेभने जवाफ के होला ?
हेर्नुस यो प्रश्नको जवाफ हामीले कम तर त्यस नदीमा जथाभावी फोहर फ्याल्नेहरुलाई सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यो अभियान भन्दापनि नियमित प्रक्रिया हो । हामी निरन्तर रुपमा गरिरहेका छौँ । बागमती, मनहरा, हनुमन्ते लगायत देशैभर लहर चलेको छ तर यसमा हामी सबैको व्यवहार र संस्कार सुधार नआएसम्म पूर्ण सफल हुन सकिदैन । जथाभावी लुकेर फोहर फ्याल्ने संस्कार हटाउने र मनोहरा र हनुमन्ते खोलामा सरसफाई गर्न ९ वटा समुह मार्फत सरसफाई अभियान चलाईरहेका छौँ । अब रणनीति परिवर्तन गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।
नदी सरसफाईमा संलग्न हुनेहरुको मनोविज्ञान बढी प्रचारमुखी भयो भन्ने आरोप छ ?
सरसफाई र प्रचारमुखी दुई भिन्न कुरा हुन् । मेरो व्यक्ति सन्र्दभमा भन्नुहुन्छ भने मानिस भएर पृथ्वीमा आएपछि समाजका लागि आफुले सक्ने काम गनुपर्छ भन्ने सोचे र बागमती नदी सरसफाई अभियानमा संलग्न रहे । हामीले के बुझ्यौ भन्दा बागमती मात्र सफा गरेर हुदैन त्यसमा हनुमन्ते र मनोहरा नदीका फोहर पनि व्यवस्थापन तर्फ लाग्यौँ । अहिले निकै उत्साहका साथ नागरिकको सहयोग र उपस्थिती रहेको छ । प्रचारले नै गर्दा हामी यहाँसम्म आएका हौँ । म सबैलाई पहिला काम अनि प्रचार गर्न आग्रह गर्छु ।
स्थानीय सरकारसगँ अधिकार छ, फोहर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ र पनि कार्यान्वयन खोई ?
तपाईले चित्रण गरेको स्थिती नाजुक र विडम्बनाको हो । अधिकार ऐन दुवै छ तर कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिलाई सहयोग त गरिरहेका छौँ । व्यक्तिले ऐनलाई भन्दापनि ऐनले व्यक्तिलाई निर्देश दिएको अवस्था हो । सबैमा ईच्छा शक्तिको कमि छ । व्यक्तिले फोहर नफाल्ने वातावरण र संस्कार बसाउदै जथाभावी फोहर फ्याल्नेलाई कडा कारवाही गनुपर्ने हुन्छ । स्वभाविक रुपमा ऐन नीति नियममा व्यवस्था त छ तर त्यसको अक्षरंस पालना गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकार, सामाजिक संघ सस्था, नागरिक सबैमा साझा अठोटको साथ सहकार्य गरे कानुन अनुरुप व्यवहारमा लागु गर्न सकिन्छ ।
टाढाका अभियन्ता त आए तर स्थानीयवासीहरुलाई सहभागी गराउन सक्नु भएन भन्छन् नि ?
मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ तर विगतमा भन्दा स्थानीयवासीहरुको सहभागिता र सक्रियता बढेको छ । सबै नागरिकहरु दृढ संकल्पका साथ लाग्नु भएको छ । फरक दल र आस्था भएका मानिसहरुलाई पनि वातावरण जस्तो विषयमा एक भएर काम गर्दै संमृद्ध र सुन्दर भक्तपुर बनाउन आव्हान गर्छु । प्रदुषणको मार र शिकारमा सबैजना पर्ने भएको हँुदा यसमा सचेत हुन अनुरोध गर्दछु । फोहर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सबैको प्रयास र परिश्रम आवाश्यक भएकोले संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धिका लागि आउनुहोस् सहकार्य गरौँ।
भारतको मनसुन वर्षाले सम्पूर्ण देशलाई ढाक्यो
World’s biggest water lily species discovered
सिड्नीको बाढीले सडकलाई नदीमा परिणत